Fantaro bebe kokoa momba ny lalàna momba ny heloka bevava ao Dubai | Orinasa Mpampanoa lalàna
Ny rafitry ny lalàna momba ny heloka bevava ao Dubai dia voataonan'ny Lalàna Sharia, izay lalàna ara-pivavahana sy fitsipi-pitondran-tenan'ny finoana silamo. Sharia dia miresaka momba ny olana toy ny firaisana ara-nofo, heloka bevava, fanambadiana, toaka, filokana, akanjo
Fahendrena foana ny mahafantatra ny lalàna sy fitsipika fototra ao amin'ny firenena misy anao, na ianao na mpifindra monina, na mpila ravinahitra, na mpizaha tany. Mety tsy te handika lalàna na fitsipika ianao ary ho tratra tsy mahalala izany. Tsy fialan-tsiny velively ny tsy fahalalana ny lalàna.
Ho an'ny firenena toa an'i UAE, ny lalàna momba ny heloka bevava dia somary conservative. UAE dia fivorian'ny firenena silamo izay hentitra amin'ny etika, fitondran-tena ary fivavahany. Na dia toerana fizahan-tany miorina aza i Dubai izay misy vahiny betsaka amin'ny mponina dia tsy miova izany.
Ny fomba tsara indrindra hivelomana malalaka any UAE dia ny fahalalana farafaharatsiny ny fototry ny fitsipika sy ny fitsipika. Ireo dia hanavotra anao amin'ny heloka bevava sy fanitsakitsahana tsy manan-tsiny mandritra ny fotoana itoeranao.
Ny kaody Dubai Penal Code dia mazava tsara amin'ny fitsipika mifehy ny fanehoam-pitiavana. Ohatra, ny mpivady ihany no mahazo mifehy tanana alim-pifandraisana. Fa izany ihany no fanehoana fitiavana feno leferina. Ny fanitsakitsahana an'io fehezan-dalàna io toy ny famihinaana, fanorohana, fitsokisana imasom-bahoaka dia mety handroaka anao any ivelan'i Dubai.
Ny fihetsika sy fihetsika manafintohina toy ny fitenenan-dratsy dia heverina ho heloka be vava. Ireo mandika ity lalàna ity dia iharan'ny onitra, na fandroahana, na am-ponja.
Ny mponina rehetra sy ny mpizaha tany dia tsy maintsy maneho fanajana ny mariky ny Emira Arabo Mitambatra (saina, marika nasionaly) sy ny fivavahana. Raha araraotina ireo, dia voasazy amin'ny fandoavana lamandy, na fanagadrana, na fandroahana an'ireo mandika izany.
Ny akanjo fitafy dia anisan'ny lalàna momba ny heloka bevava any Dubai. Tsy misy olona tokony hanao akanjo tsy mendrika amin'ny fisehoana be loatra ny hodiny. Ny akanjo dia tsy maintsy atao amin'ny halavany mety.
Ny fifohana sigara dia navela amin'ny faritra voatondro fotsiny. Tsy mahazo mifoka sigara any amin'ny toeram-pivarotana, fivarotana, na birao.
Ny maka sary ny olona tsy nahazoana alalana dia voarara. Miharatsy izany rehefa raisina ny tsy fitovian'ny sarin'ny vehivavy sy ny fianakaviana.
Voarara ny mandihy sy mitendry mozika mafy eny amin’ny toerana malalaka. Anisan'izany ny valan-javaboary, trano fonenana, na tora-pasika. Ny trano fisotroana sy ny klioba dia tsy maintsy mahazo fahazoan-dàlana na fahazoan-dàlana mandihy alohan'ny hamelany ny mpanjifany handihy.
Ireto dia vitsivitsy monja amin'ireo lalàna momba ny heloka bevava ary ny kaody famaizana izay tokony ho tsaroana. Ny lisitra dia misy fotsiny ny fahitana miharihary sy fahita matetika ataon'ny expatriates.
Voampanga tamin'ny heloka bevava tany Dubai
Ny fomba tsotra indrindra hisorohana ny fiampangana heloka bevava dia ny tsy fanaovana azy ireo amin'ny voalohany.
Hajao ny lalàna, araho ny fomba fitafy, ary fantaro izay azonao atao sy tsy azonao atao any UAE.
Tandremo ny fihetsikao na dia mila fahazoan-dàlana amin'olona aza izany alohan'ny hanaovana na inona na inona.
Ahoana anefa raha toa ka voampanga ho nanao heloka bevava ianao, na dia miezaka mafy aza? Inona no fiantraikan'izany eo amin'ny fiainanao any Dubai, UAE?
Voalohany, hojeren'ny manampahefana akaiky ny fisianao any UAE. Azonao atao ihany koa ny manantena fa hanomboka fanadihadiana momba anao izy ireo ary tonga hatrany amin'ny fangatahana fitiliana ADN hanaporofoana fa meloka ianao tamin'ny fanaovana heloka bevava toy izany.
Raha tsy manatrika fakana am-bavany ianao na hita fa meloka tamin’ny fandikan-dalàna, dia hotazonina ianao. Marina izany ho an'ny olom-pirenena rehetra, mponina ary mpizahatany any UAE.
Rehefa voaheloka noho ny fiampangana heloka bevava, dia miankina amin'ny heloka vitanao ny sazianao.
Satria ny lalàna Sharia dia ampiasain'ny fitsarana Dubai, dia ho raisina ho meloka noho ny tsy fahampian'ny porofo na vavolombelona hanaporofoana ny tsy fananan-tsiny ianao.
Raha hita fa tsy manan-tsiny ianao, dia ho voafafa sy hodiovina ny firaketana heloka bevava anao.
Afaka manampy anao ny mpisolovava iray miaro ny heloka bevava
Mety hisy fiantraikany amin'ny fiainanao ny fananana firaketana heloka bevava any UAE. Izany no antony hanakarama mpisolovava mpiaro ny heloka bevava hisolo tena anao.
Ny mpisolovava heloka bevava ao Dubai dia tsy hiaro anao amin'ny fiampangana diso fotsiny fa ho eo ihany koa hitarika anao mandritra ny dingana sy hanaraka ny raharahanao ary hampahatsiahy anao ny fe-potoana fandoavam-bola.
Na ianao ao anatin'ny Dubai Expatriate Community, anisan'ny mponina ankapoben'i Dubai na mpizahatany, dia eo an-tanana ny ekipa mahay ao amin'ny orinasanay Advocates and Legal Consultants hanampy anao hamaha ny olanao.
Raha mila fanazavana fanampiny momba izay tokony hatao rehefa voampanga ho nanao heloka bevava any Dubai, antsoy izahay izao amin'ny 971506531334 na +971558018669, na alefaso mailaka izahay amin'ny case@lawyersuae.com
Eritreritra 4 momba ny “Fantaro bebe kokoa momba ny lalàna heloka bevava any Dubai”
03/06/2015 amin'ny 12:51 PM
Salama / mam,
Efa 11 taona aho no niasa tany India High School Dubai ho mpampianatra mozika tampoka dia namoaka memo izy ireo ny faha-15 feb. Niampanga ahy ho fiampangana lainga izy. ny fampitsaharana rehefa namarana ahy tamina antony tsy izy izy ireo, omaly dia nandefa ny fika farany nataoko izy ireo izay karama sy karama 1 volana izay tsy takatry ny saiko.
Mpampianatra be fanoloran-tena tokoa aho nandritra ny taona maro [28yrs] nampianatra tany India ary eto dia tsy nahazo anarana ratsy intsony androany fa nanontany ny fampianarako izy ireo taorian'ny 11 andro lasa. tsy mety ve azafady toro-hevitra hevitra inona no ataoko?
10/13/2015 amin'ny 1:33 PM
Andriamatoa / Ramatoa,
miasa mandritra ny 7 taona aho. taorian'ny fialako ary nahatontosa ny fotoana nahamarihako 1 volana. rehefa niverina aho handamina ny fanafoanana ahy, nampahafantatra ahy am-bava ilay orinasam-pifandraisana fa nametraka ny raharaha heloka bevava izy ireo izay tsy marina. ary mitranga izany mandritra ny fialan-tsasatrao. nolavin'izy ireo ny hanondro ahy ny antsipirian'ny raharaha momba ny heloka bevava ary nilaza tamiko izy ireo fa hihazona ny fanafoanana ahy izy ireo ary hampiakatra izany amin'ny mpampiasa ahy vaovao. azoko atao koa ny mametraka raharaha manohitra azy ireo noho ny fiampangana lainga. azafady manoro hevitra ny zavatra tokony hataoko?
10/24/2015 amin'ny 2:23 PM
Heveriko fa mila mitsidika anay ianao mba hifampidinika amin'ny raharaha tsia.